Ngimaphi amathuluzi ongayeluleka ukulandelela i-Amazon yokuthengisa yabamncintiswaneni bami?
Ukuhlaziya umncintiswano yingxenye ebalulekile yocwaningo eyenziwe yilowo nalowo umthengisi ophumelelayo e-Amazon. Uma udinga ukulandelela i-Amazon yokuthengiswa komncintiswano wakho, nansi iphepha elifushane lokusebenzela ukukusiza ngalokhu. Ingabe umncintiswano wakho ngempela ukhulu? Yini engenziwa kangcono? Ingabe umkhiqizo wakho ufana nokuhlunga kwakho? Nazi izinto eziyinhloko ukuthi ugcine ukunakwa okuqondile - ukubuyekezwa, ukukhushulwa, nokukhishwa kuhlu - de retrato de. Ake sibone ngabanye ngezansi.
Akusikho u-brainer, kodwa ukubuyekezwa kuyimithombo ewusizo ngempela yokucwaninga kokuncintisana kokuqala. Asikho isidingo sokuthi ukubuyekezwa kwamakhasimende kumkhiqizo ofanayo kungakunika ingcezu yengqondo mayelana nokuthi ingayithuthukiswa kanjani, noma ivinjelwe ngokufanayo. Futhi isimiso sesithupha ngukuthi abathengisi abahlanu abaphezulu abahlinzeka ngomkhiqizo ofanayo ngokuvamile banokuthile okubukezwa ukubuyekezwa kwamakhasimende angamakhulu amathathu. Kodwa isabelo sezingonyama zabathengi ngisho nabanelisekile ngokuphelele siza ngaphandle ngaphandle kokushiya impendulo. Ngakho-ke, yini engenziwa ngakho? Ngincoma ukusebenzisa ithuluzi le-Feedback Genius yamahhala. Ngeke nje ikuthumelele isaziso kuzo zonke izimpendulo ezingalungile noma ukubuyekezwa kwamakhasimende ukuze ube nesisindo esheshayo kwesaziso esifushane kodwa kwenza kube lula ukuthumela i-imeyili ngokuzenzakalelayo, okusebenza njengesikhumbuzo esihloniphekile esikisela ukuthi wonke umthengi wakamuva uphonsa amazwana noma ubufakazi.
Ngezinye izikhathi izincintiswano zakho eziseduzane zingase zivele ngokuzumayo ngokuthengisa okukhulu, futhi inani elikhulu lemigomo eqhubekayo eliqhutshwa yizinyathelo ezikhuthazwayo ziphathwe ngendlela efanele. Futhi uma uqaphela ukuthi isu elikhethekile lomncintiswano noma nje icebo elincane elihlakaniphile lisebenza ngempela - kungani ungalandeli ithrekhi le-Amazon nokunyusa umphikisi wakho ukuze usebenzise izinhlangothi ezinamandla kakhulu ukuze kuzuze wena? Nakhu lapho ithuluzi le-Big Tracker inthanethi liqala ukudlala. Ngeli thuluzi eliwusizo, awukwazi nje ukulandelela ukuthengiswa kwama-Amazon okuthengiswayo, ukukhokhiswa kwentengo yamakethe akho emakethe kodwa ugcine cishe yonke idatha yokuphromotha erekhodiwe. Hlela ukuhamba kwakho okulandelayo usuvele wazi ukuthi izimbangi zakho zenzani kangcono ukuthi ulandele ukulandela.
Lena yindawo enkulu yokugcina ukugxila komncintiswano. Futhi ukuthuthukisa izinga lokukhangisa komkhiqizo ngekhwalithi efanele yokwenza kahle yilokho okuvame ukuholele ekuboniseni okungcono kakhulu ekusesheni kwe-intanethi ngaphezu kwalokho. Nansi indlela ongayithatha ngayo - ithrekhi nje ye-Amazon yokuthengisa amagama angukhiye asetshenziselwa abathengisi abaphezulu ukuletha abafunayo kakhulu ezihlokweni zakho zomkhiqizo, izincazelo, amaphuzu e-bullet, njll. Futhi ngincoma ithuluzi le-Jungle Scout elizokugcina amahora ucwaningo olunzima futhi oluyinkimbinkimbi. Hlola ama-metric ayisihluthulelo akho bese uthola ukusikisela okusemqoka kwegama elingukhiye nokuqondisisa okubalulekile ekusetshenzisweni kwemishwana yokucinga yesikhathi eside ngendlela ehlakaniphile kakhulu. Ungase futhi uhlole ithuluzi le-Merchant Words, elibhekiswe ngqo ekutheni usesho lwe-Amazon, ngezinombolo zokusesha eziphezulu kakhulu kanye namagama angukhiye angasetshenziswa abathengi bukhoma ngaphesheya.